အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ- NUCC ၏ ပထမဦးဆုံး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ​ ရက်ရွေ့ဆိုင်း - Myanmar Pressphoto Agency
MPA October 4, 2021 1 min read
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ – NUCC မှ အနာဂတ် ဖယ်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေသည့် အရေးကြီးလုပ်ငန်းစဥ်များကို ပြည်သူများသိရှိစေရန်အတွက် သတင်းစာရှင်းလင်းခြင်းကို အောက်တိုဘာ ၅ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သော်လည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ အချိန်မီပြီးစီးခြင်းခြင်း မရှိသေးပါသဖြင့် ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း NUCC မှ သိရသည်။
စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ အချိန်မီပြီးစီးခြင်းခြင်း မရှိသေးပါသဖြင့် အင်္ဂါနေ့ (၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁)တွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ခဲ့သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်းပါကြောင်း၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို အမြန်ဆုံး ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဖိတ်ကြားလွှာ ကိုပြန်လည်ပေးပို့မည်ဖြစ်ကြောင်းကို NUCC မှ ပြန်လည်အကြောင်းကြားခဲ့သည်။
တိုင်ရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းမှ ခေါင်းဆောင်များ၊​ စုဖွဲ့မှု အသီးသီးမှ ခေါင်းဆောင်များ၊ စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှုကိုဖော်ဆောင်နေသည့် ဖယ်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးအတွက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီလုပ်ဆောင်နေသည့် လုပ်ငန်းများ၊ တော်လှန်ရေးအတွက် အရေးကြီးသည့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဥ်များကို ပြည်သူများထံသို့ သတင်းမီဒီယာများမှ တစ်ဆင့်ရှင်းလင်းတင်ပြမည်ဖြစ်သည်။
#NUCC #သတင်းစာရှင်လင်း #MPA
The National Unity Consultative Council’s (NUCC) Press Conference Postponed
Although the National Unity Consultative Council (NUCC) was supposed to conveneapress conference on October5to present to the public the important processes being done for buildingafuture Federal Democratic Union, it has now been postponed as arrangements have not been finished in time, according to the NUCC.
As preparations have not been completed in time, the press conference planned to be held on5October 2021 has been postponed; and the press conference will be held as soon as possible and invitation letters will also be sent, the NUCC notified.
The activities and important processes forward for the revolution being done by the National Unity Consultative Council led by leaders from the Ethnic Armed Organizations and leaders from respective groups displaying collective leadership for buildingafuture democratic union will be presented to the people through news media.
Tags: MPA Myanmar News NUCC Politics
Previous: ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၏ သက်သေထွက်ဆိုမှုမှာ အခြေအမြစ်မရှိကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပြော
Next: နေပြည်တော်မှ ဖမ်းဆီးခံအကသကျောင်သားသမဂ္ဂဥက္ကဌမိသားစုနှင့်တွေ့ခွင့်မရသေး